जिवनलाई सरल तरिकाले लिनु पर्ने रहेछ भन्ने सिकाएको छ । भाइरसले धनी गरिव नभन्ने रहेछ । भाइरसको चपेटामा विश्वका धेरै मानिसहरु परेका छन ।
चिनको युवान सहरबाट नोवेम्बर २०१९ बाट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइसरले विश्वको जनजिवन लगायत विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गरेको छ । लकडाउनको असर सवैमा परेको छ । लकडाउनको समयमा आत्महत्या, घरेलु हिसां, बलात्कार, डिप्प्रेसनका घटनाहरु घटी रहेका छन भने विहान बेलुकी ज्याला मजदुरी गरि जिविकोर्पाजन गर्ने मजदुरहरुको रोजीरोटी खोसिएको छ । कार्यलयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु निकालिएका छन । धेरै युवाहरु बेरोजगार भएका छन । हजारौँले रोजगारी घुमाइएको छ । कोरोना सवैको जिवनमा एउटा रहस्य बनी आएको छ ।
अग्रेजी नयाँ वर्ष २०२० सुरुवातीसगैँ धेरैले आप्mना सपनाहरु बुधेका थिए होला, योजना बनाएका थिए होला, जिवनलाई नयाँ दिशामा लागे गहकिला योजना र खुट्किलाहरु पार गर्ने सपना बुधेका थिए होला तर यी सपना विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ ले चकनाचुड बनाएको जस्तो लाग्छ ।
नेपालीले नेपालीहरुको नयाँ बर्षसमेत मनाउन पाइएन । मात्र सामाजिक संजाल मार्फत शुभकामना आदनप्रदान गरि मनाएका थिए । भाइरसले गर्दा नेपालमा सुरु भएको भिजिट नेपाल २०२० पनि स्थगित गर्नु परेको छ । नयाँ बर्ष नयाँ उमङ्गका साथ आउने गर्छ भन्छ तर यस बर्ष कोरोना भाइरसका साथ आयौ । यसले धेरैको जिवनमा असर गरेको छ ।
एका तर्फ भाइसरको डरले घर परिवारसगँ समय विताउन पाइ रहेको छ भने अर्को तर्फ काम नहुदा बेरोजगार भएर बस्न बाध्य भएका छन । जिवनलाई सरल तरिकाले लिनु पर्ने रहेछ भन्ने सिकाएको छ । भाइरसले धनी गरिव नभन्ने रहेछ । भाइरसको चपेटामा विश्वका धेरै मानिसहरु परेका छन । आजसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने विश्वमा ८,७९१,७९४ संक्रमित, ४६४,०३९ जनाको मृत्यु भइ सकेको छ ।
प्रया देशहरु भाइरसलाई साम्य पार्न लकडाउनमा छ । आफ्ना देशका नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि लकडाउन गरिएको हो । नेपालमा पनि लकाउन छ । नेपालमा लकडाउनसर्गै बार्षिक बजेट, लिपुलेक, कालापानी, लिप्याधुरा समेटिएको नयाँ नस्सा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालमा भाइरससगैँ स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा घोटला भएको देखि लिएर प्रधानमन्त्रीको भाइरस सम्बन्धी भाषणले सामाजिक संजाल लगायत संचार माध्यम प्रचारबाजी भइरहेको छ । यो कठिन घडिमा सर्वसाधरण जनताको हितमा भन्दा पनि कमाउने तर्फ लागेको जस्तो अनुभव लकडाउनमा नेपाली जनताले गरेका छन । भाइरसबाट लड्न सरकार जनताको साथमा नभएको अनुभव गरेका छ । १० अर्व भाइरस न्युनिकरण गर्नमा सरकारले खर्च गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञाप्ती सुनेपछि नेपाली युवा जमात भाइरसको प्रवाह नगरि सडकमा निस्केका छन । पहिलो चरण बालुवाटारमा १० करोडको हिसाव किताव प्रष्ट पार्न माग गर्दै शान्तिपुर्न आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीले पानीको फोहोरा युवा जमातलाई हानेका थिए । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा यस्तो गर्नु भनेको युवाहरुलाई अन्याय भएको अनुवभ गर्छु । यो कुनै राजनितिक दलले परिचालन गरेको आन्दोलन हैन । सचेत नेपाली युवाहरुको जमात हो । यसमा साथ दिन हजारौँ युवाहरु सडकमा आएका छन । युवाहरुलाई साथ दिन बुवाआमाहरु पनि साथमा आएका छन । प्रया आन्दोलनमा नपठाउने बुवाआमाले यस शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा आफ्ना छोराछोरीलाई पठाइएका छन । आफ्नो छोराछोरीले गरेका आन्दोलन देशको हितका लागि हो भनी बुवाआमा गर्वका साथ सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेर गर्व महसुज गरेको देखेका छौ ।
लकाउनमा नेपालमा आत्महत्याका घटना, जातिय छुवाछुतको घटनाहरु घटी रहेका छन । देश लकडाउनमा छ तर पनि जातिय हिंसाको घटना घटी रहेको छ यसले समाज कुन दिशामा गइ रहेको छ भनी चित्रण गर्छ । देशलाई विकाश गर्न शिक्षा आवश्यकता हुन्छ । जातीले देश विकास हुने हैन । समाजमा जनचेतनाको कमी रहेको छ । रुकुम घटना दुख लाग्दो छ । आफ्नो प्रेमिका लिन गएका नवराज विकसहित ६ जना युवाहरुले ज्यान घुमाउनु परेको छ । माया प्रेममा पनि जातिया विभेद कहाँ छ नेपाली समाज ? यस घटनाले जातिया हिंसा सम्बन्धी काम गर्दै आएका संघसस्थाहरुलाई पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । कहाँ गयौँ त सामाजिक अभियानहरु यही हो जातिया हिसां विरुद्ध चालिएका कदम ? यी नै हुन त चेतना फैलाइएको ? यसको मुख्य जड भनेको शिक्षा र सामाजिक परम्परा रहेको छ । यसलाई सचेत नेपाली युवाहरु निर्मुल पार्नु पर्छ ।
लकडाउनका सकारात्मक, नकरात्मक पक्ष ।
जव चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन सुरु भयो यसले सवैको दैनिक जिवन नै परिवर्तन गरि दियो । सधै सवेरै उठेर अफिस, आप्mनो व्यापार व्यावसाय गर्न निस्कनेहरु घरमा नै बस्नु परेको छ ।
सधै काम, कार्यलयमा व्यास्त रहनेहरुले घरपरिवारलाई समय दिन पाएका छन ।
समयको महत्वलाई बुझ्न सकेका छन ।
घर बस्दा परिवार आफन्तहरुलाई समय दिन पाएका छन ।
कठिन घडीमा सरल तरिकाले लिनु पर्ने रहेछ भनी सिक्न पाएका छन ।
सामाजिक सेवाको भावनामा बृद्धि भएको छ ।
विहान बेला ज्याला मजदुरी गरि जिविकोर्पाजन गर्नेहरुलाई असर गरेको छ ।
धेरैले रोजगारी घुमाउनु परेको छ । यसको असर युवापिडीमा परेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ ।
आत्महत्या, बलात्कार, जातिय हिसांको घटनाहरुमा बृद्धि भएको छ ।
लकडाउनले विश्वलाई नै उथलपुथल पारिएको अवस्थामा नेपालमा पनि असर परेको छ । यसको असर केही गर्छु भनी हिडेका युवाहरुको योजनामा असर गरेको छ भने अर्को यसले नयाँ पाठ सिकाएको छ । घरमा नै बसेर पनि धेरै कार्यहरु गर्न सकिएको छ । लकडाउनमा सामाजिक संजालहरुबाट सामाजिक कार्यहरु भइ रहेको छ । जमघट हुन नसकेपनि अनलाइन मार्फत नै मिटिङहरु गरि रहेका छन । यसले जिवनलाइ सरल तरिकाले लिनु पर्ने रहेछ भन्ने सिकाएर गएको छ ।
प्रकाशित मिति ७ असार २०७७, आईतवार १२:२७